Ababhali abakhokhelwa kakhulu ka-2014 no-2015 | Izincwadi Zamanje
Ababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2014 nango-2015
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngibhale i-athikili yombono lapho ngichaze khona izithiyo umlobi obekungamele akwazi ukuzishicilela nabashicileli kuphela kepha ukukwazi kuphela ukuphila ngokusebenza kwakhe njengombhali. Uma ufuna ukufunda leyo ndatshana, kulokhu isixhumanisi uyitholile.
Namuhla sikulethela i-athikili ephikisana ngokuphelele, ngoba sikulethela uhlu lwe ababhali abakhokhelwa kakhulu kowezi-2014 nowezi-2015. Uma ufuna ukwazi ukuthi ngubani la magama, hlala nathi ukuze ufunde yonke le ndatshana. Impela akhona amanye amagama akumangazayo.
Ababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2014, ngokusho kweForbes
Ngokukamagazini waseMelika iForbes, laba ngababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2014:
UJames Patterson, onezigidi ezingama- $ 90: Mhlawumbe ungomunye wababhali abakulolu hlu ofanelwe kakhulu ukuthola leso sikhundla, ngoba naye ungomunye walabo abasebenza kakhulu kuso. Ushicilele izincwadi eziyi-16 ngonyaka esizwa ngababambisene naye, futhi kusukela ngo-1976 ubhale amanoveli angaphezu kwama-80. Ungayeki ukufunda amanye amanoveli akhe okusolisayo, mahle impela! Ngendlela, phinda isikhundla ohlwini lwababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2015.
UDan Brown, unezigidi ezingama- $ 28: Wayaziwa ngenxa yokushicilelwa komunye wabathengisi abathengisa kakhulu emhlabeni, "Ikhodi ye-Da Vinci". Isikhundla sakhe kubabhali abahola kakhulu ngonyaka ka-2014 kungenxa yokuthengiswa kwamakhophi akhe angaphezulu kwezigidi eziyi-1.4 "I-Inferno", isitolimende sesine se- «saga».
UNora Roberts, $ 23 million: Ngubani owathi inoveli yothando ifile? UNora Roberts, afakazele cha. Ubhale amanoveli othando angaphezu kwama-280, futhi ngokubukeka kwawo, ngempumelelo enhle yokuthengisa. Asazi noma ngenxa yekhwalithi yayo kanye / noma ngenxa yenani elikhulu lezincwadi ezibhalwe kuze kube manje.
UDanielle Steel, unezigidi ezingama- $ 22: Omunye umbhali odumile wamanoveli ezothando. Bekanye noNora Roberts, bangababhali ababili abazinikele "kwezothando" abathengisa amanoveli amaningi walolu hlobo. Imvamisa ungomunye wabazongenela ukhetho minyaka yonke ukungena kulolu hlu "olukhokhelwa kakhulu" lweForbes ... Kuzoba yinto ethize ...
UJanet Evanovich, onezigidi ezingama- $ 20: Igama lakhe lingahle lingakutsheli okuningi, kungahle kube okokuqala ngqa ukuzwa ngalo mbhali, kepha uJanet Evanovich ubekwe ohlwini # 5 ohlwini lwababhali abahola kakhulu. Bhala inoveli yabaseshi neyothando.
UJeff Kinney, one- $ 17 million: Ungumbhali wochungechunge lwezincwadi "Idayari kaGreg". Ngaphezu kokubhala, futhi ungumqambi womdlalo futhi ungumculi wencwadi yamahlaya. Ungumculi wobuciko impela!
UVeronica Roth, onamadola ayizigidi eziyi-17: Ungumbhali wenye isaga enkulu, "Okuhlukanisayo", yize singazi ukuthi ngabe kwaziwa kangcono ngezincwadi noma ama-movie. Lo mbhali uneminyaka engu-27 kuphela futhi usevele ubekwe # 7 kulolu hlu. Ngabe ucabanga ukuthi lizohlala kuwo isikhathi eside?
UJohn Grisham, onezigidi eziyi-17 zamaRandi: Ithengise amakhophi angaphezu kwezigidi ezingama-250 emhlabeni wonke. Ungumbhali wamanoveli afana nawo "Ijaji" o "Ikhava".
UStephen King, onezigidi eziyi-17 zamaRandi: I-classic emelana nokufika kwezincwadi ezintsha. Kubo bonke abaziwayo, lo mbhali wezokwesaba nokusola, ubambe isikhundla unombolo 9 futhi ube nenhlanhla njengabanye abaningi balabo okukhulunywe ngabo ngaphambili, ukuthi amanoveli akhe asiwe esikrinini esikhulu. Ngubani ongakhumbuli "Ukukhanya"?
USuzanne Collins, onezigidi ezingama- $ 16: Omunye umbhali omuhle wenye i-trilogy enhle: "Imidlalo Yendlala". Futhi yize inani lakhe ekuthengiseni lincipha ngokuqhubekayo, usevele ukwazile ukufinyelela endaweni phakathi kwabakhokhelwa kakhulu.
Kulolu hlu, kulezi zikhundla ezilandelayo, sinokulandelayo:
JK Rowling, enamadola ayizigidi eziyi-14.
UGeorge RR Martin, enamadola ayizigidi eziyi-12.
UDavid Baldacci, enamadola ayizigidi eziyi-11.
URick riordan, enamadola ayizigidi eziyi-10.
U-EL James, enamadola ayizigidi eziyi-10.
UGillian Flynn, enamadola ayizigidi eziyi-9.
John Green, enamadola ayizigidi eziyi-9.
Ababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2015, ngokusho kweForbes
Futhi-ke, uma uqhathanisa, uzokwazi ukubona ukuthi yibaphi ababhali abebekhuphuka ezikhundleni kulolu hlu onyakeni owodwa nje kuphela, abasele besesimweni esifanayo, abasanyamalala nokuthi yiziphi izinto ezintsha ezijoyinisiwe abanenhlanhla «abahola kahle »Ngaleli zwe elihle kakhulu lezincwadi:
UJames Patterson, unezigidi ezingama- $ 89 hlala phambili.
John Green, isukile ezingeni le-17 yaya kunombolo 2 ngonyaka olandelayo, futhi isuka ekuzuzeni amaRandi ayizigidi eziyi-9 ngo-2014 yaya ku Ama-dollar ayi-26 e 2015.
UVeronica Roth, onezigidi ezingama- $ 25 kungenye ekhuphuka ezikhundleni. Isukile ku-7 yaya ku-3.
UDanielle Steel, isabalwa kunombolo 4 ngamaRandi ayizigidi ezingama-25, 3 ngaphezulu kunango-2014.
UJeff Kinney, ngamaRandi ayizigidi ezingama-23 isengezo esisha.
UJanet Evanovich, onezigidi ezingama- $ 21, ilahle indawo eyodwa kulolu hlu: kusuka ku-5 kuye ku-6.
UJK Rowling, onezigidi ezingama- $ 19, ukukhuphuka izikhundla: kusuka ku-11 kuye ku-7.
UStephen King, onezigidi ezingama- $ 19 kungenye ephinda ohlwini, futhi inyuka ngesikhundla esisodwa.
UNora Roberts, unezigidi ezingama- $ 18, lehla ngokusobala ohlwini, kusuka ku-3 kuye ku-9.
UJohn Grisham, onezigidi eziyi-18 zamaRandi, yehla izindawo ezimbili, kusuka ku-8 kuye ku-10.
Ucabangani ngalezi zinhlu? Uyababona belungile? Ubani ocabanga ukuthi kufanele abe kuyo unyaka nonyaka?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Ababhali abakhokhelwa kakhulu ngo-2014 nango-2015
ISalamanca izosingatha umkhosi wayo wokuqala wezincwadi omnandi
URowling usuvele ubhalile iskripthi sefilimu yesibili ethi "Izilwane Ezimnandi". Incwadi entsha obonayo?